IFOTO YOMTSHATO KA-ERIN FOSTER IVUSELELA IMPIKISWANO YECORONAVIRUS - IINDABA
Eyona Iindaba U-Erin Foster Uxolisa kwi-Coronavirus Wedilesi Yomtshato: 'Bendingalunganga'
U-Erin Foster Uxolisa kwi-Coronavirus Wedilesi Yomtshato: 'Bendingalunganga'
U-Katy Perry kunye nezibini ezininzi ze-2020 baphendule. UStefanie Keenan / Getty Izithombe zeC & Inyanga Ukuhlaziywa ngoMatshi 15, 2020
U-Erin Foster wazithatha njengomtshakazi onethamsanqa-de wajongana necala lempikiswano phakathi isifo se coronavirus esiqhubekayo . Umhlekisi kunye nomzekelo, otshatele uSimon Tikhman kumtshato woNyaka oMtsha, uthathe i-Instagram ukuba abelane ngesithuba esidlalayo ngoMvulo we-13 ku-Epreli, ebhiyozela umtshato wakhe kwiinyanga ezininzi ezidlulileyo. Nangona kunjalo, yafundwa njengengakhathaliyo ngenxa yexesha.
UFoster, intombi yomvelisi womculo uDavid Foster, wabelana ngefoto kusuku lomtshato wakhe kwaye wongeza amagama athi: 'Ungaziqhayisi, kodwa leliphi ixesha lokuba ube nomtshato wakho.' Isithuba sele sithathiwe kwiphepha likaFoster, kodwa ingxoxo yomoya yenzeka iintsuku ezininzi. Ekugqibeleni uFoster waxolisa ngeposi yakhe.
'Andilufumani uvuyo ngokukhathaza iimvakalelo zabantu,' utshilo kwiindaba ze-Instagram kwiintsuku zevidiyo emva kokuba umyalezo wakhe unyukile. 'Ayindenzeli nto. Ndifumana uvuyo [ngokwenza] abantu bahleke kwaye andizange ndibenalo uphawu lokuhlekisa olwaluthetha ukuba ludlamkile okanye lucaphukisa abantu nangayiphi na indlela… Ngokuqinisekileyo andifuni ukuba kule ndawo apho abantu bacinga ukuba ndenze into okanye wathetha into ebuhlungu kwaye ndiyaxolisa ukuba ndone umntu iimvakalelo. Andiyenzi lo nto, ayisiyonto yam leyo. '
U-Presley Ann Slack / uPatrick McMullan ngokusebenzisa imifanekiso kaGetty
Amagqabantshintshi malunga nesithuba sikaFoster yayingumxube phakathi kwabo bamkela isiqabu se-comedic phakathi kwesi sifo, ngokuchasene nabanye abavakalelwa kukuba amazwi kaFoster ayengakhathali phakathi kwengxaki eqhubekayo yabantu abatshatileyo ekufuneka behlehlise imitshato yabo. Iinkwenkwezi ezinjengoKaty Perry, uJen Meyer no-Olivia Munn nabo bagqabaze ngeposti kaFoster esele icinyiwe ngoku.
'Iimvakalelo zikhombe @erinfoster,' utshilo uPerry. Imvumi yomlilo ', ewe, lelinye lawona magama makhulu omtshato wakhe ukuba uchaphazele umtshato yi-COVID-19. Inkwenkwezi ekhulelweyo kunye neOrlando Bloom bekufanele ukuba babe nomtshato apho baya khona ngo-2020.
Abanye abalandeli baqhwabele izandla uFoster ngenxa yoburharha bakhe. Enkosi ngokubonelela ngesiqabu ngexesha elinzima, 'ubhale @stephbergie. 'Ndingumtshakazi ka-2020 ekufuneka ehlehlisile umtshato wakhe kwaye ndicinga ukuba yinto entle le!
izixeko ezilungileyo kumaqela e-bachelorette
'Ntombazana umtshato wam bekufanele ukuba yile mpelaveki izayo kwaye u-obvi urhoxisiwe .... Omnye umsebenzisi @ kellonearth2020 uphawule, 'Mhle kwaye uyonwabisa! Nceda ungayenzi le nto! '
Uninzi, nangona kunjalo, bakhutshwa kukungakhathali kukaFoster. Ngaba awunakuyicacisa le nto? Kukho izigidi zabantu, ngaphandle kwabo baphulukana nabantu ababathandayo nemisebenzi, abajongana nokucima nokutshintsha imitshato yabo kunye nenyani yokuba abanakuze babe nomtshato abebewuphupha, 'ubhale u @jackieolemberg. Njengomntu oluntu le nto ayikhathali, kwaye ngexesha elinje kufuneka uzame ukuba ngcono. Enkosi.'
'Yhu,' utshilo u @anjenag. 'Zininzi izibini ezitsala nzima ngokwenene ngoku. Ayikokuba kufuneke ukuba ndihlehlise umtshato kuphela, kodwa andinawo ubunewunewu bokubona okanye ukwahlukanisa umntu endiza kutshata naye. Sobabini singamagqirha. Ndisebenza eCanada yena usebenza eMelika. Ndijonge kwizithuba zakho njengoncedo lwee-comic, into eza kundiphazamisa kuxinzelelo lomsebenzi wam, ukungakwazi ukubona iqabane lam, kunye nentliziyo ebuhlungu yokuhlehlisa umtshato wam kwaye ungazi ukuba uyakwenzeka nini. Nceda uqwalasele le post. '
'Ndicinga ukuba uyonwabile, kodwa le ayiziva ilungile. Uxolo, '@ lisaholbrook23 uphawule.
'Umtshato wakho wawumhle kwaye ndandithanda ukubona imifanekiso, kodwa njengomntu onomhla womtshato kamva kulo nyaka ophumayo ngenxa ye-COVID-19, mhlawumbi ayisiyiyo eyona post ilungileyo ngoku,' wongeze @kwfogarty.
Imfesane entle, sisi. Ukuqhula okungenancasa, yiza, utshilo u-@electricellie, ngelixa u-christinediane07 ephawule: Hlikihla ityuwa emanxebeni. '
'Ndikuthanda kakhulu kakhulu, kodwa kuye kwafuneka ndenze isigqibo esibuhlungu nesibuhlungu ngokwasemoyeni sokurhoxisa umtshato wam ngenxa ye-COVID,' ubhale watsho umlandeli @sofiavanraan. 'Esi sithuba asikhathalelanga uninzi lwethu olulahlekelwa yimali ngenxa yokumisa imitshato yethu. Kodwa nakubantu abaphulukene namalungu osapho kunye nabahlobo ngenxa yale ntsholongwane. '
U-Foster, nangona ekuqaleni wayezithethelela ngentetho yakhe, uthathe ixesha ngo-Epreli 14 ukucinga ngempembelelo yamazwi akhe. Emva kokuba 'elele kuyo,' waqonda ukuba ufuna ukuphepha ukuba semfazweni nokuba ngubani 'emfazweni nabani na.'
Umhla womtshato kaDonald Trump uMelania trump
Wongeze wathi, 'Ndiphazama. Bendingazimiselanga kukhubekisa mntu kwaye ndiyaxolisa. ' Uye wayicima iposti yakhe.
Nangona uluvo lukaFoster lwenziwa ngesiqhulo (ngokuhambelana nokuhlekisa kwakhe), isikhululo saphula umthetho wegolide kwisikhokelo sezinto esingazithethiyo kubantu abatshatiswe imitshato yabo ngenxa ye-COVID-19. Ewe, uFoster wayenethamsanqa ngokwaneleyo ukuba aqhubele phambili ngomtshato wakhe woNyaka oMtsha, ukuthintela ukubekelwa ecaleni kweenyanga ezimbalwa.
Nangona kunjalo, ukuhanjiswa kunye nexesha kunokubangela izibini eziye zahlangabezana nesiphelo esahlukileyo. Lilonke, sibonile amashumi amawaka ezibini ezitshatileyo kufuneka zibambe kwaye zihlehlise imitshato yazo ngenxa ye-COVID-19. Abanye bacwangcise umtshato wabo ngaphezulu konyaka kwaye bajongana neengxaki zemali kunye nezinye izinto ezinxulumene nempilo. Ngenxa yobume bentsholongwane obuqhubekayo, ayiloxesha lokucebisa ukwenza ukukhanya kwimeko apho uninzi lwezibini kunye namashishini endawo athe achaphazeleka.
Ingcebiso yethu? Thumela iintyatyambo endaweni yoko uxhase abahlobo bakho ngeli xesha sele linzima.
iikhabhathi ezimnyama zasekhitshini
curls kwicala iinwele
utshata njani eMichigan
Indawo yomtshato we greenhouse kufutshane nam
iingoma zokungena emtshatweni 2016
indlela yokwenza isaphetha esifanelekileyo